अब छोरी जन्माउन निकै डर भो! - ।। Naya Kuro ।।
६ माघ २०७६, सोमबार १८:१२ January 20, 2020 Naya KuroLeaveaComment on अब छोरी जन्माउन निकै डर भो!
मैले सम्मान प्रकट गर्ने एक जना दिदीको एक छोरा छ। हर हमेशा उहाँले निकै गर्व गर्नुहुन्छ छोरी हैन छोरा जन्माएकोमा । कहीँकतै मलाई भेट्नु भयो भने घरमा छोरीलाई एक्लै छोड्नु हुन्न है, जमाना ठीक छैन भन्दै सामाजिक परिवेशको यथार्थबोध गराइरहनु हुन्छ।
मान्छे स्वयमको मनोवल कति उच्च र कति कम छ भन्ने कुरा ऊ बाँचेको समाजले पनि निर्धारण गर्दोरहेछ। जति नै आफूलाई सुरक्षित र आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्न खोजे पनि आफू बाँचिरहेको समाज नै सुरक्षित छैन भने ऊ त्यो परिस्थितिमा बलियो छु भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो।
यो समाजमा महिला कति असुरक्षित छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त दिइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका र रेडियो, अखबार, टेलिभिजन हेर्नेहरूका लागि क्षणिक जिव्रो टोकाइको विषय मात्र बन्न थालेको बलात्कार हत्याका समाचार।
केही समय पहिलाको एउटा प्रसंगले समाजमा विभेदको जरा कसरी गाडिएको रहेछ भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु। दुई छोरा पाएकी एक महिला मित्रले निकै गर्व साथ भनेकी थिइन्, ‘अब छोरी जन्माउन निकै डर भो। एक्लै छोड्न पनि डर, कहीँ कतै पठाउन पनि डर। छोरा भएपछि यस्ता कुरामा चाहिँ ढुक्क हुने रहेछ।’
एक अभिभावकका छोरी पीडित भइरहँदा अर्का अभिभावकका छोरा पीडक भएका छन्। जन्मदानै छोरीलाई लक्ष्मी भनेर विशेषण दिने यो समाजले छोरा जन्मँदा राम, लक्ष्मण कृष्ण जन्मे भनेर विशेषण दिएको सुनिँदैन।
पहिलो सन्तान छोरी भएपछि सहानुभूति राखेर चित्त बुझाउ भन्न खोजिएका दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वतीका उपमा दिइरहँदा के छोरी त्यही हुर्काइमा बाँच्न पाएकी छिन् त? छोरा भए ढुक्क भयो भनेर सुत्केरी भएकै दिनदेखि गरिने व्यवहारले छोरा र छोरी जन्माउने आमाबीचको खाडललाई बढाइ रहेको छ। कमजोर र बलवान् सावित गरिरहेको छ।
कहाँनिरबाट त्यो तत्वले भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुराको खोजीमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं। एउटा अभिभावक आफ्नो छोरी बुहारीमाथि भएको आततायी व्यवहारबाट प्रताडित भइरहँदा अपराधमा संलग्न पुरुष पात्रका अभिभावक पनि अपराधको दोषी करार बनेर समाजमा अघोषित सजाय भोगिरहेका हुन्छन्।
हिनताबोधले शिर झुकाउन बाध्य भएका हुन्छन्। कुसंस्कारी सन्तान जन्माएकोमा पश्चातापबाट भित्रभित्र जलिरहेका हुन्छन्। केही समय पहिला स्याङ्जामा आफ्नै काकाबाट बलात्कारमा परेकी बालिकाले सबै सत्य आमालाई भन्दा पनि उनले त्यसविरूद्ध आवाज बाहिर ल्याउन सकिनन्।
आज पनि बलात्कार हिंसामा परेका महिला बालिकामाथि समाजको दृष्टिकोण निकै नकारात्मक छ। क्षणिक दयामायाको पात्र बनाइन्छ तर सामाजिक रूपमा अघोषित बहिष्कार गरिन्छ।
अनि आमा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सत्य लुकाएर छोरी बाँचिरहने समाजमा यथार्थ नआओस् भन्ने कसरतमा लागिपर्छिन्। छोरी बाँचिरहँदा थप कुनै मानसिक पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने तर्फ उनको सोचाइ पुग्दछ।
त्यसैले आमा न्याय नलड्दै, हार स्वीकार गरेर बस्न बाध्य हुन्छिन्। साँझ अलि ढिलो छोरी घर आउँदा अनेक तर्कना पालेर छटपटीमा रहने अभिभावकले छोरो घर ढिला आउँदा वा नआँदाको छटपटी खासै देखिँदैन। छोरा हो केही हुँदैन भनेर सहज रूपमा लिने प्रवृत्ति छ।
मात्रामा तल माथि हुन सक्छ। कानुन कार्यान्वयको पक्ष पनि अर्को पाटो हो। मुख्य कुरा यौन हिंसाका घटना हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। महिलामाथि भएको हिंसाको घटनालाई पुरुषवादी सोचले हेरेर नजर अन्दाज गरिरहँदा यो सामाजिक रोगको रूपमा फैलिएको छ र जुनसुकै बेला मेरो घर परिवारमा पनि सर्न सक्छ भन्ने कुराको बोध हुन जरुरी छ।
३० मंसिर २०७६, सोमबार ०७:१८ December 16, 2019 Naya Kuro